Indlela ukupheka unyaluthi iphalishi e multivarka "Redmond" noma "Panasonic"?
Millet iphalishi e multivarka "Redmond," njengabo bonke abanye okusanhlamvu, uzilungiselele ngaphandle nzima kakhulu futhi uphendulela ngobuhlanya okumnandi njalo. Abanye baze bagomele ngokuthi ekhishini iyunithi yakhelwe ukulungiselela okulula iphalishi. Kanti kulesi sihloko sizobe ukwabelana nawe zokupheka eyokusiza udala okujabulisa emangalisayo Culinary.
Millet iphalishi e multivarka "Redmond": iresiphi №1
Okokuqala, hlola ukuthi zikhona yini ekhishini lakho izithako ezilandelayo:
ubisi fresh - ilitha isigamu;
unyaluthi - amagremu amakhulu amathathu namashumi amabili;
usawoti kanye noshukela - ukunambitha yakho siqu;
ibhotela - amagremu amathathu noma amane.
Isinyathelo ngesinyathelo guide:
Udinga ngokucophelela siyixazulule unyaluthi futhi begeza ke. Nge Pshenko kufanele prodelyvat kudingekile ngempela ukuze asuse Vanino port, ngokuvamile enamathiselwe ngomunyu le lokudlela.
Khona-ke uthele endishini Multivarki isigamu ilitha ubisi, uthele unyaluthi ahlanzekile, usawoti, ushukela ne bhotela.
Vala lid. Qondanisa "Ukupheka" Imodi, ukhethe uhlobo lomkhiqizo - "Iphalishi", setha isikhathi ngokusebenzisa le nkinobho ethi "Setha isikhathi". On iyunithi Siyafulesha inkomba kumele sibonise imizuzu engamashumi amathathu. Yilokho singakanani isikhathi ukwenziwa unyaluthi iphalishi e multivarka "Redmond."
ikhishi iyunithi yakho ngeke bakumema ukuba isignali yakhe ukukhala ukuthi siyobonisa ukuthi isidlo sesilungile!
Millet iphalishi e multivarka "Redmond": iresiphi №2
Wonke umuntu uyazi ukuthi wokudla - kuba ukudla ewusizo kakhulu izingane ezincane, nazo zonke abadala. Awu, emnene kakhulu oatmeal multivarka "Redmond" - akuyona amavithamini ukudla kuphela, kodwa futhi okumnandi kakhulu. Phela, lolu phiko is kulondoloza ngokugcwele izimfanelo ezizuzisayo futhi ukunambitheka okusanhlamvu!
ubisi (fresh) - namamililitha ayisithupha namashumi amahlanu kanye;
unyaluthi - eyikhulu namashumi amabili amagremu;
ibhotela (ibhotela) - amathathu amagremu;
ushukela - amathisipuni ezintathu noma ezine;
usawoti - isigamu isipuni.
Ngaphambi ukupheka amabele njalo uxubha izikhathi kahle eziningana ngaphansi kwamanzi agelezayo.
Thela oluthile lokudla ngamanzi abilayo futhi ushiye ke imizuzu emihlanu. Lokhu kuyokunika liphalishi umbala bunzima kakhulu futhi elikhanyayo aphuzi.
Khona-ke wabeka cereal e isitsha Multivarki yakhe ekhethekile. Kukhona futhi uthele ubisi e lemali ngenhla.
Pour konke ushukela ne bhotela ukubeka (ibhotela). Manje lezi izithako udinga uhlanganise kahle.
Vala lid, vula "Ukupheka" Imodi bese usetha umsebenzi "iphalishi". Njengomthetho, kulungiselelwa lokhu isidlo imayelana amathathu imizuzu.
Ngo inqubo ukulungiselela avunyelwe ukuvula lid ugovuze liphalishi wedwa.
Uma isidlo selupholile, ungakwazi ukusakaza Skeet uphake. Njengoba ubona, unyaluthi iphalishi e multivarka "Redmond" ilungiselela ulula. Kungaba kuzosungulwa ezahlukene izithelo ozithandayo, inyama noma imifino.
Millet iphalishi e multivarka "Panasonic"
unyaluthi - isigamu inkomishi;
amanzi - nendebe;
ubisi - isigamu ilitha;
ibhotela (ibhotela) - amabili nanhlanu amagremu.
Millet hashaza futhi imizuzu embalwa, uthele amanzi abilayo. Ngalesosikhathi thela off amanzi bese efakwa pan iqolo iyunithi. Engeza usawoti, ibhotela, ushukela, uthele yonke ubisi namanzi. Khetha uhlelo "Ubisi iphalishi", kodwa kuphela nokubambezeleka of akukho esingaphansi kwehora elilodwa. Ngemva kwamahora amabili, nawe ungadla ngokuphepha efudumele futhi elimnandi unyaluthi incumbe.
Indlela ukupheka kebabs ne kiwi? indlela Fast and ukonga ukuze
Ingabe uyazi indlela ukupheka irayisi?
Indlela ukupheka Easter, obucayi esihlwabusayo ngokungavamile
Indlela ukususa ngomunyu isitshalo seqanda cwilisa kahle bese upheka nabo
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka-tuna. Ukusetshenziswa kwe-tuna okusemathinini
Kungani gcoba amawindi plastic? Uyabakhathalela imithetho, imiyalo, iziqondiso
Ithebula izibani ngezandla zabo. Indlela yokwenza ithebula isibani zezingane
Indawo yokudlela yasekhaya yasekhaya nge-Relax And Tone - Izinqubo Zokuqhosha
Kuyini wusizo izinwele collagen nokuthi ukusisebenzisa?
Aevit - amavithamini ubuhle
Uba kanjani zombie e "The Sims." amathiphu
Poet Yan Raynis: Biography, izici yokudala, amaqiniso athakazelisayo
Toothpaste "Colgate optic White": Izibuyekezo
LCD "Svetlanov": lonjiniyela, abanikazi langempela
Umuthi 'Eutiroks'. Ukubuyekeza, izincazelo, izinkomba